Dhalinyaro kale oo Soomaali ah oo lagu dilay K/Afrika - Caasimada Online
Home Warar Dhalinyaro kale oo Soomaali ah oo lagu dilay K/Afrika
Dhalinyaro kale oo Soomaali ah oo lagu dilay K/Afrika
Cape Town (Caasimada Online) – Wararka laga helayo dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya inay sii kordhayaan dilalka iyo weerarada ka dhanka ah dadka ajaaniibta ah oo ay Soomaalida ku jirto ee ganacsiyada & shaqooyinka kala duwan u jooga gudaha wadankaas.
Dhibaatooyinka ugu badan ayaa waxaa haatan wajahaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsiyada ku leh dalkaas, waxaan kordhay cabsida la xiriirta weerarada lagu hayo.
Sida ay wararka sheegayaan waxaa xalay xaafadda Khayelitsha oo ka tirsan magaala xeebeedka Cape Town lagu dilay labo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed, waxaana dilalkooda ka dambeeyey kooxo burcad Afrikaan ah oo goobta isaga baxsaday, kadib falkaasi.
Labada wiil ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Yuusuf Jowhar iyo Yaasiin Cumar, waxaana goobta lagu dilay gaaray ciidamo ka tirsan Booliska dalkaasi.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in halka lagu dilay dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale lagu dilay laba nin oo dhalasho ahaan kasoo jeeda wadanka Malawi.
Dilalka loo geysanayo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa qayb ka noqonaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay, waxaana 48 saac ee lasoo dhaafay dalkaas lagu dilay saddex dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray Cali Maxamed Xasan Balaakii, Cabdirashiid Axmed Sheekh Maxamuud iyo Mowliid Yare, kuwaas oo lagu dilay Magaalada Cape Town.
Xaaladda Koonfur Afrika ayaa u muuqata mid kasii dareysa, waxaana sii badanaya beegsiga lagu hayo ganacsatada Soomaalida, iyadoo aysan jirin wax ka qabasho dhanka dowlada ah.